Igbo, John: Lesson 035 - Chineke na-arụ ọrụ na Ọkpara Ya (Jọn 5:17-20) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 035 (God works with His Son)
A - AGBA NKE ABỤ JURUSALEM (Jọn 5:1-47) -- IHE: ỊMỌRỤ ỤMỌ N'AKWỤKWỌ JIZỌS NA NDỊ JUU
2. Chineke na-arụ ọrụ na Ọkpara Ya (Jọn 5:17-20)
17 Ma Jizọs zara ha, sị, "Nna m ka na-arụ ọrụ, n'ihi ya, m na-arụkwa ọrụ." 18 Ya mere, ndị Juu na-achọsi ike igbu ya, n'ihi na ọ bụghị naanị na o mebiri Ụbọchị Izu Ike, kama ọ kpọkwara Chineke onwe ya Nna, na ya onwe ya nhata na Chineke.
Tupu ịgwọ ọrịa na Bethesda, mmegide megide Jizọs dị obere. Ma mgbe ihe omume ahụ gasịrị, o toro. Ndị iro ya kpebiri igbu ya. Ya mere, ọrụ ebube bụ mgbanwe na mmekọrịta ndị Juu na ndị Juu. Site na mgbe ahụ, a kpagburu Jizọs na nke ojii. Gịnị bụ ihe kpatara mgbanwe a?
Esemokwu weere ọnọdụ n'etiti ịhụnanya Kraịst na ikike nke Iwu ahụ na njide ya. N'Igba Ochie ndi mmadu biri dika odi n'ulo mkporo. E nyere ọtụtụ ikpe iwu ndị mmadụ idebe iwu ahụ n'ụzọ ziri ezi maka ezi omume sitere na ọrụ ọma. Ndị na-asọpụrụ Chineke ji nlezianya lezie anya ka ha ghara imebi iwu nke oge ahụ na inweta ihu ọma Chineke. Idebe iwu na-abụ ihe ncheta maka egoism na enweghị ịhụnanya. Ebe ọ bụ na mba ahụ biri ndụ na Chineke ma bụrụ onye e weere na ọ bụ ụlọ ọrụ dum, ndị na-akpata òtù ụka gbalịrị ịmanye onye ọ bụla ime ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ ha. Ihe kachasị mkpa bụ iwu Ụbọchị Izu Ike na ọrụ. Dika Chineke zuru ike n'ubochi nke asaa site na oru nke okike ya, obuna otua ka amachibidoro ndi mmadu ime ihe obula n'ememe ofufe a, na onwu nke onwu.
Ya mere, Ụbọchị Izu Ike aghọwo ihe ịrịba ama nke nkwekọrịta n'etiti ndị Juu na Chineke ha, ma gosipụta ọnụnọ Ya n'etiti ha, dịka à ga-asị na ọ dịghị mmehie ha mere megide Chineke iji mee ka nkwenye a dị.
Jizọs nwere azịza dị mfe nye ndị Farisii bụ ndị boro megide mmebi iwu nke Ụbọchị Izu Ike, "Chineke na-arụ ọrụ". Anyị na-agụ okwu ahụ bụ "ọrụ" na ihe ndị na-emepụta ya, dị ka ịrụ ọrụ ugboro asaa n'okwu Jizọs nye ndị Farisii. Nzaghachi ya nye iwu nkwado ha bụ ikwupụta ọrụ ịhụnanya nke Chineke. Kedu ka Chineke ga - esi zuru ike ruo ugbu a site n'ọrụ okike Ya, ma ugbu a ọ na - arụ ọrụ mgbe nile? Ebe ọ bụ na mmehie abata n'ụwa a, ọnwụ wee merụọ ihe niile e kere eke, ma eluigwe na ala kewara site na isi iyi ya, Chineke nọ na-agbalịsi ike ịzọpụta ndị na-awagharị awagharị, ma weghachite ndị nnupụisi n'ime mkpakọrịta ya. Omuma anyi bu ihe obum n'uche Ya, iji mata ima Ya n'anya.
Ngwọta Ụbọchị Izu Ike bụ ihe osise nke ọrụ Chineke n'eziokwu. Jizos kwusaara amara wee me kwa omume ihn'anya, obezie nao l ya nwere ike iyi kao naadighi Iwu ah. Ịhụnanya bụ mmezu nke Iwu ahụ. Ngwọta Ụbọchị Izu Ike bụ ịwakpo ndị na-efe ofufe ụgha, na-enweghị ịhụnanya.
Ya mere ndị Juu tiri mkpu, sị, "Jizọs na-emebi ụbọchị izu ike! Enyemaka! Ogidi nke ọgbụgba ndụ ahụ na-akụda. Onye iro nke Iwu ahụ na-ekwulu ya, ma debe onwe ya dị ka onye na-enye iwu ọhụrụ, ihe ize ndụ nye mba anyị. "
O dighi onye nime ha ji mara ih n'anya nke Kraist nye onye ajah, ha ah ghi kwa mmeri ya n'elu wa. Ha nọgidere na-eme ka ha kpuo ìsì. Ka o ghara iju gi anya ma oburu na ndi mmadu adighi-amata Jizos dika Onye nzoputa, n'ihi ihe di otua.
Ndi Juu were iwe megide Jizos n'ihi kwa 'nkwulu' ha chere na ha nuru na Chineke b Nna ya. Nke a na-eme ka ha ghara ịdị ọcha. Ya mere, ha tiri mkpu, "Chineke bu otu, O nwegh i Okpara, olee ot 'u Jizos si akp o Chineke Nna ya?"
Nkwupụta a na-ekpughe ọhụụ ha; ha adighi ebi ndu nke Mo Nso, ma ha adighi emikpu n'ime akwukwo nso. N'ihi na e nwere amụma dị ịrịba ama banyere Nna nke Chineke nime ha. Chineke akporo ndi nke Iwu ah "Nwa m" (Opupu 4:22, Hosea 11: 1). Mgbe mba ahụ na - akpọ Chineke "Nna" (Deuterọnọmi 32: 6; Abụ Ọma 103: 13; Aịzaya 63:16; Jeremaya 3: 4,19 na 31: 9). Chineke kpọrọ eze ya kwere ekwe "nwa m" (2 Samuel 7:14). Ma ọ dịghị onye ọ bụla so na mba ọgbụgba ndụ ahụ nwere ikike ịkpọ Chineke "Nna". Nke a agaghị ekwe omume maka echiche ndị Juu, ma gụọ oke mmebi iwu. Ndi Ju mara nkwa ahu na Jisos, Kraist, gabu site na Chineke, onye neweta ndu ebighebi. Ha kpọrọ Jizọs asị gosipụtara enweghị okwukwe ha na Mesaịa ya.
Jizọs zara okwu ndị Juu tụrụ egwu n'okwu ya site n'ikwu n'ụzọ doro anya na ọ na-arụ ọrụ ndị ahụ dị ka Nna ya nwere amamihe na ịhụnanya. Jisos kwuputara na ya puru ime ihe nile ma buru kwa ya na Chineke. Mmeghachi omume nke ndị Juu na echiche dị otú ahụ siri ike ma bụrụ onye obi tara mmiri. Onye ọ bụla nke na-ebuli onwe ya elu n'ebe Chineke nọ ka a ga-ewepụ. Ndị Juu kpọrọ Jizọs asị dị ka onye nkwulu nke kwesịrị ọnwụ.
19 Ya mere Jisus zara ha, si, N'ezie asim unu, Ọkpara apughi ime ihe ọ bula n'Onwem, kama ihe Ọ huru Nna-Ya nēme. N'ihi na ihe ọ bula ọ nēme, ndia ka Ọkpara ahu nēme kwa otú a. 20 N'ihi na Nna-ayi nāhu Ọkpara-Ya n'anya, nēgosi kwa Ya ihe nile nke Ya onwe-ya nēme. Ọ ga-egosi ya ọrụ ka ukwuu karịa ndị a, ka i wee ju gị anya.
Jizọs zara ndị Juu na-asọ oyi n'anya, na-ebute ịkpọasị ha site n'igosi ọrụ nke ịhụnanya Chineke. Ee, Ọkpara ahụ na-eme dị ka Nna. Jisos adigh aru n'onwe ya n'ihi na ya na Chineke di nso dika nwatakiri nke nacho nna ya anya, n'ile anya ya abua ka o hu ot 'esi eme ya; eme dika nna ya. Ya mere o wedara onwe ya ala wee weghachi Nna ya otuto. Ọ sọpụrụ Nna ya. Ka anyị ghọta na anyị bụ ndị ohu na-abaghị uru, ndị a na-akpọ iji doo aha Nna anyị nsọ dika Jizọs.
Site n'ịjụ onwe onye na ịdị umeala n'obi, Jizọs nwetara ikike ime ọrụ Nna ya. Àgwà, aha na ọrụ nke Nna bụ ya. Ọ bụ ezi Chineke, ebighi ebi, nwee ike, ịhụnanya na ebube. Ya na Chineke zuru okè.
Chineke Nna ah hr Kraist n'anya n’ihi onwe ya, ozoghi iheobla nime ya. Ọ na-ekekọrịta ikike, atụmatụ na ọrụ ya na Ọkpara ya. N'okwu ndị a, anyị na-ahụ nkwado zuru oke nke ịdị n'otu nke Atọ n'Ime Otu - ịdị n'otu nke ịhụnanya n'ịrụ ọrụ. Ebe ọ bụ na Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ na-arụkọ ọrụ n'ihe nile, anyị kwesịrị ịkasi obi n'ịmara na Atọ n'Ime Otu dị nsọ na - arụ ọrụ n'enweghị ihe ọ bụla - iji kwụsị agha nile, ịkpọasị na ịba ụba n'ụwa. Lee ọdịiche dị n'etiti ịdị n'otu nke ịhụnanya na-arụ ọrụ, na njedebe nke iwu.
EKPERE: Nna anyị nke eluigwe, anyị na-ekele gị maka izitere anyị Ọkpara gị. N'ime ọrụ ya, ị gosiri anyị ihe ị na-eme, na onye ị bụ. Wepụ anyị n'aka ọrụ niile gbasara iwu iji họrọ ọrụ ịhụnanya. Ka anyi chegharia n'eme ndi mmadu, ma na-ario unu maka ndi kpuru ìsì nke ime mmuo ka ha wee hu nnwere onwe nke ima unu, ma rubere unu isi n 'irubere isi.
Olee otú na ihe mere Chineke ji arụ ọrụ na Ọkpara Ya?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:57 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)